Siyaasiga Cabdirmaan Cabdishakuur oo weerar Afkaa ku qaaday Beesha Caalamka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Siyaasiga Cabdirmaan Cabdishakuur oo weerar Afkaa ku qaaday Beesha Caalamka
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur oo ka mid ah Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa eedeyn kulul u jeediyey beesha caalamka xili dalka uu galay xaalad siyaasadeed oo cakiran.
Waxaa intaas ku daray in beesha caalamka ay u muuqato kuwa waqti lumis ah xagal daacinaya, isla markaana aysan weli waayo aragnimo ka helin dhammaan shirarkii siyaasadeed ee uu fashiliyey Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday.
C/raxmaan C/shakuur ayaa intaas ku daray in Haddii aan laga waantoobin talladaas ay masuuliyaddaas qeyb ku yeelan doonaan beeeha caalamka, iyaguna ay sameyn doonaan tallaabooyin iyo ficillo cad-cad maadaama buu yiri weli indhaha laga qabsanayo sida Farmaajo u doonayo muddo kororsi
Dhinaca kale, Madaxwyenihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in Madaxweynaha uusan qaadi karin wax tallaabo ah, isla markaana ay ka dhamaatay sharciyadii uu dalka ku maamulayay.
Sheekh Shariif oo sii hadlay ayaa uga digay Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya in siyaasad loo adeegsado, waxaana uu ugu baaqay in aysan qaadan amar qaldan oo ay faraan Madaxda mudada xil-heyntooda uu ka dhamaaday.
Labada musharax ayaa hadalkan ka jeediyey kulan ay maanta iskugu yimaadeen midowga musharaxiinta oo looga arrinsanayey xaalada adag ee dalku galay ka dib markii madaxweyne Farmaajo uu ka dhamaaday muddo xileedkii dastuuriga ahaa, iyadoo uusan jirin qorshe doorasho oo heshiis lagu yahay.
Previous articleCABDINUUR: Waxaan talo odaytinimo ku soo jeedinayaa in Nuune & Hayaan ay hogaanka jaaliyada ku wareejiyaan….” [WARAYSI]
Next articleQof ku.libisa dharka Ciidanka oo wax dhacaayey iyo Laamaha Amniga oo rasaas dhex martay Caawa
Dagaal lagu laaayey Ciidamo Badan oo ka tirsan Dowlada Federaalka ...
Khasaare xooggan ayaa la soo sheegayaa inuu ka dhashay weerar jidgal ah oo galabta ka dhacay inta u dhexeysa degmooyinka Wanle-weyn iyo Afgooye ee...